January 20, 2021 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha January 20, 2021
(London) 21 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa dib ugu soo laabtay hoggaanka horyaalka Premier League kaddib markii ay 2-1 uga soo adkaadeen Fulham oo ay booqdeen. Kooxda martida loo ahaa ee Fulham ayaa hoggaanka ciyaarta la wareegtay daqiiqaddii 5-aad kaddib markii Ademola Lookman uu ugu shubay xiddigaha Man United kubbad ay garab dhaaf […]Sii akhriso
(Italy) 21 Jan 2021. Waxaa goor dhow soo idlaatay ciyaartii kama dambeysta ee koobka Super Cup-ka dalka Taliyaaniga taasoo u dhexeysay kooxaha Juventus iyo Napoli. Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa kusoo idlaatay barbarro goolal la’aan ah, waxaase markii dib la isugu soo laabtay Juve hoggaanka u dhiibay weeraryahankooda Cristiano Ronaldo kaasoo shabaqa gaaray Sii akhriso
(Manchester) 20 Jan 2021. Manchester City ayaa garoonkeeda Etihad guul kaga gaartay kooxda Aston Villa, kaddib markii ay kaga adkaadeen 2-0, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulamada horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayey ku kala nasteen labada kooxood Mancheter City iyo Aston Villa barbardhac 0-0 ah. Qeybta labaad ee dheesha marka dib leysugu […]Sii akhriso
(England) 20 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Fulham iyo Manchester United ee horyaalka Premier League ayaa la shaaciyey. Kooxda Fulham ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Manchester United si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka England. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan […]Sii akhriso
(Spain) 20 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Alcoyano iyo Real Madrid ee Copa del Rey ayaa la shaaciyey Kooxda Alcoyano ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Real Madrid si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan tartanka Copa del Rey. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Alcoyano […]Sii akhriso
(Italy) 20 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Juventus iyo Napoli ee horyaalka Premier League ayaa la shaaciyey. Xafiiltanka adag ee labada dhinac ee Waqooyiga iyo Koonfurta, Juventus iyo Napoli ayaa ku kulmi doona caawa garoonka Mapei Stadium, kulankii 33-aad ee Supercoppa Italiana. Iyadoo koobkii ugu horreeyay ee xilli ciyaareedka doonaysa inay gacanta ku […]Sii akhriso
Former Somali ambassador to U.S. dies in Columbus – The Columbus Dispatch
Somali News January 20, 2021
Former Somali ambassador to U.S. dies in Columbus The Columbus DispatchSii akhriso
(Manchester) 20 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Manchester City iyo Aston Villa ee horyaalka Premier League ayaa la shaaciyey. Kooxda Manchester City ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Aston Villa si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka England. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo […]Sii akhriso
Madaxweynaha Galmudug oo kormeeray xerada Dhaan karoone ee duleedka Gelinsoor “SAWIRRO”
Soomaaliya January 20, 2021
Muqdisho (SONNA)-Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye “Qoorqoor” ayaa maanta tababar u soo xiray ciidanka Daraawiishta Galmudug ee ku sugnaa xerada Dhaan karoone ee duleedka magaalada Galinsoor. Madaxweynaha Galmudug ayaa taliyeyaasha ciidamada ka dhageystay warbixino ku saabsan ciidamada ku jira xerada, waxaana u uku booriyay inay Sii akhriso
Maxaad kala socotaa Madaxweynayaashii Maraykanka ee aan imaanin caleema saarka Madaxwaynayaashii bedelayay?
Muqdisho (SONNA)-Madaxwaynaha Maraykanka ee xilka ka sii degaya Donald Trump ayaa hore u sheegay inuusan ka soo qayb geli doonin xafladdda caleema saarka Madaxwaynaha la doortay ee Joe Biden. Go’aanka Trump uu qaatay laguma arag Maraykanka 152 sano, Madaxwaynayaashii xilkooda dhamaadayna waxay kasoo qayb geli jireen caleema saarka Madaxwaynaha cusub. Hadaba kumee Sii akhriso